ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: လက်ပံတောင်းသပိတ် နှိမ်နင်းမှု အရေးယူပေးဖို့ ၈ လပြည့်မှာ တကိုယ်တော်ဆန္ဒပြ
လက်ပံတောင်းသပိတ် နှိမ်နင်းမှု အရေးယူပေးဖို့ ၈ လပြည့်မှာ တကိုယ်တော်ဆန္ဒပြ
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 7:35 PM
ဒီမိုကရေစီ ဆီကို အာဏာရှင်စနစ်ကနေ ပြောင်းလဲရာမှာ
အာဏာ ကိုလက်လွှတ်ရမှာ ကြောက်ရွံ.တာ ၊
အာဏာ ကို နှမြောတ,သ ဖြစ်တာတွေ ရှိတတ်တာပါ။
အဲဒီကာလရှည်ကြာလေ တိုင်းပြည် နာလေ ဘဲ။
.. အဲဒီကာလရှည်ကြာမှု ၊တိုတောင်းမှုဟာ ယ္ခင်
စစ်အာဏာရှင် ယန္တရားရဲ. လက်ငုတ် လက်ရင်း မျိုးဆက်တွေဖြစ်တဲ. ဦးသိန်းစိန် ၊ ဦးရွှေမန်း စတဲ. ထိပ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင်တွေ ပေါ်ဘဲ မူတည်နေတာပါ ။
သူတို.ရဲ. ဟာ ဘာလဲဆိုတာစာင်.မြင်ကြရမှာပါ ။